Madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay Siyaasado Waxtar u leh Qaxootiga iyo Barakacayaasha – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay Siyaasado Waxtar u leh Qaxootiga iyo Barakacayaasha
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka Shir madaxeedka Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in madaxda qaaradda looga baahan yahay in ay la yimaadaan go’aamo iyo siyaasado waxtar u leh qaxootiga iyo barakacayaasha.
Shirka sannadkan ayaa diiradda lagu saaraya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha Afrika.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay labadii sanno ee la soo dhaafay ku hawlanayd sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in caqabadaha haatan ka jira qaaraddu ay muhiim tahay in lagu wajaho siyaasado iyo shuruuc mid ah oo xal waara u noqon kara dhibaatooyinka haysta qaxootiga iyo barakacayaasha.
“Labadii sanno ee la soo dhaafay, waxaannu ka shaqaynay qorshe qaran oo xal waara loogu raadinayo qaxootiga iyo barakacayaasha kaasi oo waafaqsan qorshayaasha heer gobol, qaarad iyo caalam ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Hoggaamiyaha soomaaliya ayaa u soo jeediyay madaxda shirk aka qeybgaleysa in dalalka qaaradda Afrika ay qaxootiga u fududeeyaan isu socodka, fursadaha shaqo, waxbarashada iyo shaatiyada ganacsiga si qaxootigu u yeeshaan wax soo saar, una hormariyaan noloshooda iyo xirfadahooda.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay madaxda ka qayb-galaysa shirka in abuuro jawi ay qaxootiga iyo barakacayaasha ku xaqiijin karaan himilooyinkooda mustaqbalka, isaga oo Ururka Midowga Afrika u soo jeediyay inay dardargeliyaan dhismaha hay’ad gargaar oo door weyn ka qaadata gacan-siinta qaxootiga iyo barakacayaasha.
Waxaa uu sheegay in halku dhigga shirka sannadkan uu muhiim u yahay Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya.
Waxaa uu intaasi ku daray in dadka iyo dowladda soomaaliya ay abaal u hayso dalalka Afrika ee martigeliya qaxootiga Soomaaliyeed.
← Madaxweyne ku xigeenka dalka oo ku baaqay in laga faaiideysto lacagaha horumarinta degaanka
DHAGEYSO:Degmada Beledxaawo waxaa ka jira kooxo cayareed badan hasa ahaate dhalinyarada ayaa wajahaya caqabado dhowr ah. →